Ọkachamara Moveable ọkụ ụlọ elu mmanụ dizel generator ka Onye nrụpụta na Factlọ Ọrụ Kpọmkwem | Gị dị ka
Nlereanya EP-LT5SE / 4 EP-LT10SE / 7 EP-LT10SE / 9
Oke extention nke mast m 4.5 7.2 9
Ogo Ọdụdọ Iji aka Ọdụdọ
Na-atụgharị n'akuku Ogo 340 180 340
Nrụgide ọrụ Psi (Max) 28 NA NA 35
Vetikal Isi ibu n'arọ (Max) 40 60 80
ngụkọta ike nke oriọna w 4x400 4x400 / 4x1000 4x1000
Ikike ọkụ Lumen / oriọna 36000 36000-85000 85000
Ugboro Hz 50/60
Oge oriọna Awa 5000
Na-arụ ọrụ okpomọkụ ℃ 85
Ntinye nchedo njikọ IP54
Ihe mkpuchi ọkụ Acres Ogbe 5
Lighting Tower Dielse Generator Set bụ ụgbọala na-adọkpụ, mast elu, ike ọkọnọ, akụrụngwa ọkụ, ngwakọta nke sistemụ, ụgbọala na-adọkpụ nwere ike iche iche nwere ike iji ahụ ụgbọ ala adọtara, nwekwara ike iji ụdị dị iche iche gbanwere nke van dị na mbuli elu. mast na ọkụ na akụrụngwa ndị ọzọ nwere ezi uche echichi na trailer, na-abụ a zuru set nke obere ọkụ usoro. Enwere ike ibuga ọkụ ọkụ eletrik na-aga ebe ọ bụla okporo ụzọ ga-emepe ma nwee nnukwu ọkụ ọkụ oge. Ọ dị mfe iji.
EP-LT ọkụ ụlọ elu usoro bụ kọmpat obere ọkụ ụlọ elu na 4x400W ma ọ bụ 4 * 1000W metal halide floodlights na nke mbughari Igwe na-ekpo ọkụ diesel 5KW / 10kw. Ọ dị mma maka obere ọrụ na ọkara, na ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ EP-LT dị mfe iji otu onye njikwa ya na-arụ ya.
Na-arụ ọrụ n'ụzọ dị mfe: Site na bọtịnụ smart dị iche iche iji chịkwaa ma ọ bụ gbanyụọ oriọna abụọ ahụ ma dabara adaba iji dozie elu mast ahụ aka; oriọna ahụ nwere akụkụ abụọ dị mkpa: ihe njide oriọna (gụnyere oriọna oriọna na mast) na generator (gụnyere igwe na-enye ọkụ, ọkụ eletrik na igwe ọkụ). Ọ na-adaba adaba iji zukọta, gbasasịa na njem. Arụ ọrụ mfe na magburu onwe applicability.
Ekewapụ Nkewa: Akụkụ ọ bụla nke ụlọ elu ọkụ na-agbakọ nke ọma iji gbochie mmebi ọ bụla nwere ike.
Multiplemụta multiple shockproof Ọdịdị imewe, magburu onwe mgbochi ujo arụmọrụ na ike iji reliably ke elu ugboro ujo gburugburu ebe obibi;
Adomụta gburugburu ebe obibi ìhè alloy ihe na elu-tech spraying technology, waterproof, dustproof, antirust na kwesịrị ekwesị na-arụ ọrụ na n'èzí na gburugburu ebe obibi ruo ogologo oge;
Njikọ electromagnetic zuru oke ma enweghị ike ibute ndabichi na netwọk nnyefe;
Igwe ọkụ niile na-ewebata ihe dị mma dị elu, dị elu ma nwee ntụkwasị obi ma na-arụ ọrụ nke ọma na gburugburu ebe obibi siri ike.
Omenala-ịkwa akwa ọrụ: Iji mezuo ihe dị iche iche achọrọ maka ndị ahịa dị iche iche, anyị nwere ike ịhazi ụdị oriọna dị iche iche, ike, ọkụ oriọna, oke mast na generator dị ka ndị ahịa anyị si arịọ.
Enwere ike itinye ngwa ngwa: nnukwu mpaghara, ọkụ na-enwu gbaa, ihe ndọtị pụrụ iche na ije ije ngwa ngwa, na-enye enyemaka ọdachi abalị, mberede, ọkụ na-ewu ụlọ na ikike mberede.
Nke gara aga: 5kw emeghe / nkịtị ikuku mma dizel generator set
Osote: China mgbapụta mmiri